Akatiza mukadzi nevana 16 | Kwayedza
Akatiza mukadzi nevana 16
10 Sep, 2020 - 11:09	 2020-09-10T11:43:01+00:00 2020-09-10T11:43:01+00:00 0 Views
VaKizito Ziyambe nemudzimai wavo Mai Netsai Hlatini Ziyambe nevamwe vevana vavo pamusha pavo kuGokwe. Mufananidzo uyu wakatorwa mugore ra2016 apo Mai Ziyambe vainge vakabata mwana wavo gotwe uyo ava nemakore mana okuberekwa. — Mufananidzo naMemory Mangombe
MUDZIMAI wekwaNembudziya, kuGokwe — uyo ane vana gumi nevatanhatu avo akabereka nemurume mumwechete — anoti upenyu hwamuomera zvisingai panguva ino apo veruzhinji vari kukurudzirwa kugara kudzimba senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Mai Netsai Hlatini Ziyambe (48), vemubhuku raNjanji vanoti matambudziko avo awedzerwa nekutizwa kwavakaitwa nemurume wavo, Kizito Ziyambe (50) ndokuvasiya vachiriritira mhuri yakakura iyi vari voga.
Mai Ziyambe vanoti kunyangwe zvazvo vana vachinzi chipo chinobva kuna Mwari, zvipo izvi zvavaonesa nhamo sezvo vasisakwanise kuriritira vari voga mhuri yavo ine vana vakawanda iyi.
Mudzimai uyu anoti matambudziko avo akatanga chirwere cheCovid-19 chisati chava muno — mumwedzi waNdira gore rino — apo murume wavo akavatiza ndokusara voriritira vana vari voga.
Nanhasi murume uyu haasati adzoka.
Chirwere cheCovid-19 chakatanga kuonekwa muZimbabwe mumwedzi waKurume uye kubva ipapo, Hurumende dzatora matanho akawanda ekuedza kuchimisa.
“Pakazonzi vanhu vagare kudzimba mumwedzi waKurume, murume wangu ainge asisipo ndasara ndoga nevana. Ndaimbopemha asi zvino zvave kundiomera,” vanodaro Mai Ziyambe.
Vanoti vakaroorana nemurume wavo mugore ra1990 ndokubereka vana 16. Mukuru wevana ava ava nemakore 30 okuberekwa kuchiti gotwe rine makore mana.
“Vakomana vasere nevasikana vasere uye kutaura kuno tiri kutambura, hatina mbatya, chikafu kana magumbeze zvawo. Taimbopona nekurima bindu asi zvino mvura ndiyo yava kunetsa.
“Baba vakatitiza, ndinonzwa kuti vari kuSanyati uko vava kuita chikorokoza. Havatumire mari kana kudzoka kubva pavakapata musha,” vanodaro Mai Ziyambe.
Vanoenderera mberi: “Tine vanhu vaimbotibatsira nechikafu, mbatya nezvimwe asi nguva ino vakaomerwawo. Kubva pakatanga denda reCovid-19, dambudziko redu rawedzera zvikuru sezvo kwataimbowana mabasa tave kuashaya.”
Sekutaura kwaamai ava, vamwe vana vakura mumhuri iyi vanonzi vari kungomberereka nenyika nekuda kwekutiza nzara pamusha.
“Izvozvi tine vana vanomwe vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro vakatombomiswa nekuda kwekuti zvikoro zvakavharwa. Asi kunyangwe denda iri risati rauya, ndaitadza kuvaendesa kuchikoro nekuda kwekuti tine zvikwereti zvemari yakawandisa iri kudiwa zvekuti vaigara vachidzingwa.
“Saka pazvichavhurwa apa tine vana (4) vari kuda kunyora bvunzo vanoti weFomu 6, vaviri veFomu 4 nemumwe chete weGiredhi 7. Apa vana vacho vanogona kuchikoro zvikuru,” vanodaro Mai Ziyambe.
Mutemo wemuZimbabwe hautendere kuti mwana adzingwe kuchikoro nechikonzero chekuti anenge asati vabhadharirwa mari.
Amai ava vanotenda Mambo Nembudziya nemasabhuku emudunhu ravo nekumbovabatsira kwavanoita.
“Fungai kuti pavana 16, ndini amai ndini baba pane chose chinodiwa. Zvipfuyo zvataiva nazvo zvaisanganisira mombe, mbudzi nehuku zvakapera kufa nezvirwere. Zvinodiwa pautsanana nechinangwa chekurwisa Covid-19 sesipo nemamasiki hatina. Sanitiser tinongoinzwawo ichitaurwa nezvayo.
“Vana vanorara vakaita chitsokotsoko nekuti hatina dzimba dzakatambanuka pamusha pedu.”
Kwayedza yakaedza kuridzira VaZiyambe nhare kuti itaure navo nekuda kwenyaya iyi asi nhare yavo yaisabatika.
Kune vangada kubatsira mhuri iyi vanoridza nhare dzaMai Ziyambe dzinoti 0783 164 141.